Iyo Apple Watch Series 3 ine LTE yakatotengeswa yakadzoserwa muUS | Ndinobva mac
MuSpain hatisati tine nhau dzekuti Apple Watch Series 3 neLTE ichatengeswa riini asi muUnited States, iyo ine kubva paminiti imwe mumusika wayo, vanogona shuva ku rea zvikamu zvakagadziriswa neApple pachayo pamutengo wakaderera.
Apple, nekufamba kwemwedzi kubvira chigadzirwa chave kutengeswa, chinotanga kutengesa zvimisikidzo-zviyuniti izvo zvakazara kuongororwa uye kupatswazve. Ivo vanouya kubva kudzoka kana kuvhura kwemapakeji ayo pakupedzisira asina kunge akashandiswa kana kushandiswa zvishoma.
Vazhinji vateveri vezvinhu zvakarumwa nemaapuro avo vanoenda kuApple Store kunotenga mayuniti ezvigadzirwa kuti vangovhura mapakeji avo vozomudzorera uye zviri muApple Chitoro. Iwe une mukana wekudzorera chigadzirwa muhomwe yayo uye mune yakakwana mamiriro imwe nguva mushure mekutenga.
Sezvatakataridza, iyo Nhepfenyuro dzeApple 3 neLTE ndiyo Apple Watch modhi iyo inobvumidza mashandiro ayo pasina kukosha kwekutakura iyo iPhone, kuti ugone kuwana vako vanobatika, kufona uye kunyangwe kunakirwa nezvako zvinyorwa paApple Music pasina iyo iPhone.
Tichaona zvinoitika paWWDC 2018 Muvhuro unouya nenyaya iyi ine chekuita neSpain uye yanga iri pamusika kwemwedzi yakawanda uye kuSpain hatina kana kana zano rekuti kana uyu modeli uchazotengeswa pano kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 3 ine LTE yakatotengeswa yakadzoserwa muUS.